I-SpotOn ne-Poynt: Ukumaketha Okuhlanganisiwe Kwe-POS Kwebhizinisi Elincane | Martech Zone
I-SpotOn ne-Poynt: Ukumaketha Okuhlanganisiwe Kwe-POS Kwebhizinisi Elincane
NgoLwesihlanu, Mashi 15, 2019 NgoLwesihlanu, Mashi 15, 2019 Douglas Karr
Nembile isivele ifake ngaphezu kwamaphuzu angu-3,000 amadivayisi wokuthengisa nokucubungula izinkokhelo ezindaweni zokudlela, ezitolo nakuma-salon ezweni lonke. Basebenzisane nabo I-Poynt ukuhlinzeka ngamaphoyinti okuthengisa avumela izindawo zokuthengisa nabanikazi bezindawo zokudlela ukuba baqoqe imininingwane yokuxhumana namakhasimende futhi bamukele izinkokhelo ekhawunteni, noma lapho amakhasimende akhona.
Amathuluzi Wokumaketha we-POS
Amathuluzi wokumaketha we-SpotOn enza kube lula ukusebenzisa isu lokuxhumana elihambisanayo namakhasimende akho ukuze azovame ukuqhuba ibhizinisi lakho kaningi futhi asebenzise imali eningi lapho enza kanjalo. Umphumela wokugcina awubudlelwano obungcono kuphela namakhasimende akho, kepha imali engenayo eyengeziwe yebhizinisi lakho.
Izici zamathuluzi wokumaketha nokwethembeka weSpotOn zifaka phakathi ikhono loku:
Ngenisa amakhasimende akhona bese uqhubeka nokukhulisa ngokuqoqa amakheli e-imeyili amakhasimende amasha.
Xhumana namakhasimende akho nge-imeyili, i-Facebook, i-Twitter, kanye nezixwayiso zeselula.
Dala imiyalezo yokumaketha ngokushesha futhi kalula ngewizard yomkhankaso eyakhelwe ngaphakathi yesikhulumi.
Thumela amakhasimende akho amadili azwela isikhathi ukukhuthaza ukuvakashelwa okusha.
Imikhankaso ezenzakalelayo yokuqalisa ukuvakashelwa okuvela ezingxenyeni ezahlukahlukene zamakhasimende, kufaka phakathi izivakashi ezintsha, amakhasimende akho ahamba phambili, namakhasimende angakavakasheli isikhashana.
I-SpotOn ayenzi nje ukuthi ukuphathwa kokumaketha kube lula, futhi ikuvumela ukuthi wakhe ifayela le- imivuzo yokwethembeka Uhlelo, bese uphatha eyakho ukubuyekezwa okuku-inthanethi. Uma esetshenziswa ekhonsathini omunye nomunye, lawa mathuluzi wokubandakanya amakhasimende anika ibhizinisi lakho ipulatifomu enamandla ehlanganiswe ngokuphelele nenqubo yokuphuma kanye ne-analytics eqhutshwa yidatha.
Okuhumushelwa kwikhono eliqhubeka nokukhulisa uhlu lwamakhasimende akho futhi liqoqe idatha emayelana nalawo makhasimende. Njengoba ipulatifomu yakho ye-SpotOn iqoqa idatha ethe xaxa, izoba namandla ngokwengeziwe, ikuvumele ukuthi wakhe amaqembu ahlukaniswe amakhasimende amasha kanye nekhono lokuwafinyelela ngemikhankaso ephelele yokukhangisa.
Ngaphezu kwalokho, ama-analytics edeshibhodi yesikhulumi azokuvumela ukuthi ubone ukuxhumana okucacile phakathi kwamakhasimende, ukuthengiselana kwawo, nemikhankaso yakho yokumaketha, ikunikeze i-ROI ecacile yemizamo yakho yokumaketha. Ngamanye amagama, i-SpotOn ikhipha ukuqagela ekukhangiseni. Uzokwazi kahle ukuthi yini okusebenzayo, nokuthi ungayakha kanjani imikhankaso yokukhangisa ephumelela kakhulu ngokuzayo.
Mayelana neSpotOn Transact, LLC
I-SpotOn Transact, LLC ("i-SpotOn") iyinkokhelo enqenqemeni nenkampani yesoftware echaza kabusha imboni yezinsizakalo zomthengisi. I-SpotOn ihlanganisa ukuqhutshwa kokukhokha kanye nesoftware yokubandakanya amakhasimende, inikeze abathengisi idatha ecebile namathuluzi abanika amandla okuthengisa ngempumelelo kumakhasimende abo. Ipulatifomu ye-SpotOn inikeza amathuluzi aphelele kunawo wonke amabhizinisi amancane naphakathi, kufaka phakathi izinkokhelo, ukumaketha, ukubuyekezwa, ama-analytics nokwethembeka, okusekelwa ukunakekelwa kwamakhasimende okuhola phambili embonini. Ngeminye imininingwane, vakashela ku- I-SotOn.com.
Mayelana nePoynt, Inc.
I-Poynt iyinkundla yezokuhweba exhunyiwe
ukunika amandla abathengisi ubuchwepheshe bokuguqula amabhizinisi abo. Ngo-2013, inkampani yabona ukungabi bikho kwama-smart terminals emakethe, futhi yaphinde yakucabanga ukuphela kwendawo yokukhokha etholakala kudivayisi exhunyiwe, enezinhloso eziningi eqhuba umuntu wesithathu
izinhlelo zokusebenza. Njengoba ama-smart terminals eba yinsakavukela, i-Poynt OS uhlelo oluvulekile lokusebenza olunganika amandla noma isiphi isiphetho sokukhokha esihlakaniphile emhlabeni jikelele, sakhe umnotho wohlelo lokusebenza olusha lwabathengisi futhi sivumele abathuthukisi ukuthi babhale kanye futhi basabalalise yonke indawo. IPoynt ikomkhulu layo
ePalo Alto, eCalif., enendlunkulu yomhlaba wonke eSingapore, futhi usekelwa yi-Elavon, Google Ventures, Matrix Partners, National Australia Bank, NYCA Partners, Oak HC / FT Partners, iStanford-StartX Fund, neWebb Investment Network. Thola okuningi ku
Tags: uhlelo lokusebenza lweselulaukukhokha inkokheloiphuzu lokuthengisaukuthumela imiyalezoPhumzilepoynt posnembile